Qaadka ma joojin karno | allsanaag
Qaadka ma joojin karno
Maleeshiyaadka SNM awood uma laha inay qaadka joojiyaan, laakiinse waxay barakicin karaan shacabka Soomaaliyeed ee aan hubaysnayn ee Sool iyo Sanaag
oo caddeysay in aysan awood u lahayn joojinta Qaadka
SNM ayaa gacmaha ka taagatay wax ka qabashada qaadka ka yimaada dalka Itoobiya, xilli ay sii kordhayaan kiisaska cudurka Coranavirus ee gudaha degaanadaas.
Inta la ogyahay illaa shan qof ayaa laga helay cudurka Covid19. Waxaa xusin mudan in maamulka SNM ay kaga duwan tahay qeybaha kale ee Soomaaliya, waxaa magaalooyinka caanka ah sida Hargeya, Berbera, Boorame iyo Burco laga helay cudurka.
Wasiirka warfaafinta SNM, Saleebaan Yuusuf Koore, ayaa saxaafada u sheegay in Somaliland aysan lahayn awood ciiddan oo ay ku joojiso Qaadka. Wuxuu tilmaamay ciiddamada ay haystaan in aysan ka badnayn sugida amniga gudaha.
Ciidamada SNM ee Ina Cali Koore sheegay inaanay awood u lahayn inay joojiyaan Qaadka ka imanaya Itoobiya waa kuwa habeen iyo maalin Barakicinaya shacabka Soomaaliyeed ee aan hubaysnayn ee ku nool Sool iyo Sanaag. Waa kuwa Ina Cali Koore loo adeegsado Beeshiisa.
← Itoobiya oo Albaabada ka xiratay Hargaysa Next Post →